Ahoana no mitazona ny gorodona plastika - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Ahoana no mitazona ny gorodona plastika
Ahitsio: Denny　2020-01-05　Mobile
Ny gorodona plastika dia manana tombony azo amin'ny toekarena, maroloko, ny antibakteria, tsy sondriana, manintona feo ary mahazo aina.Mankasitrahan'ny tompon'ny haingon-trano izany, koa ahoana no fomba itahihantsika azy amin'ny fampiasana manokana?
1. Esory ny fako isan-karazany amin'ny tany, ankoatra ny fanalefahana, arotsaka amin'ny rano avy amin'ny lamba famaohana anaty rano ny servisy miadana amin'ny rano ary avelao ny faritra lehibe amin'ny menaka dia azo diovina amin'ny fakana; Ho an'ny fanaovana pirinty fanimbana lava kokoa, azonao atao ny mandatsaka ny famafana maimaim-poana amin'ny lamba famaohana ary mamafa izany;
2. Voarara ny handroboka ny tany ao anaty rano.Na dia misy tombo-kase aza ny gorodona sasany dia misy vy vita amin'ny rano mba hampisarahina ny loharanon-drano, izay rendrika mandritra ny fotoana maharitra, dia misy fiantraikany lehibe amin'ny serivisy fanompoana eo amin'ny tany plastika.
3. Ho an'ny toerana izay misy olona sy mitafy dia tokony hohafohezina ny fotoana fikojakojana, ary tokony hampitomboina ny haavon'ny savoka avo amin'ny rindrina.
4. Voarara ny mampiasa fitaovana fanadiovana mafy sy henjana, toy ny bainga vy vy sy lamba manadio 100, mba hisorohana ireo zavatra maranitra tsy hianjera amin'ny gorodona elastika.
5. Ny tongotra malemy dia azo apetraka eo amin'ny fidirana amin'ireo toerana be olona izay misy fifamoivoizana avo loatra mba hisorohana ireo zavatra maranitra tsy hitifitra amin'ny gorodona elastika.
Ahoana no mitazona ny gorodona plastika Ny atiny mifandraika